डब्लुसिएल क्रिकेटकाे खेलाडी ड्राफ्ट आज - Nepal Cricket
वुमन्स च्याम्पियन्स लिग (डब्लुसिएल) टी-२० लिग को ड्राफ्ट आज हुँदैछ । आज साँझ ५ बजेपछि काठमाडौंमा हुनेछ ।
नेपालमा ड्राफ्टबाट खेलाडी छनोट पहिलो पटक गर्न लागिएको हो । ड्राफ्टमा पहिला नै सबै टोलीलाई खेलाडीहरुको नामावली सुचि दिने गरिन्छ । ड्राफ्टमा १ सय ७ खेलाडीले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् ।
वैशाख १९ देखी २५ गते सम्म आयोजकले खेलाडीलाई दर्ताका लागि आवदेन खुल्ला गरेको थियो । आयोजकले खेलाडीहरूलाई डायमण्ड, सफायर, रुबिज र वाइल्डकार्ड इन्ट्री गरी चार श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । डायमण्ड श्रेणीमा अहिले राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिरहेका खेलाडीहरू पर्ने छन् ।
यस्तै रुबिजमा राष्ट्रिय टोलीबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका र सफायरमा क्षेत्र वा प्रदेशबाट राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका खेलाडी पर्ने छन् । वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीमा ट्यालेन्ट हन्टमार्फत छनोट भएर आएका खेलाडी पर्ने छन् । प्रतियोगितामा सहभागी प्रत्येक टोलीले दुई जना वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीका खेलाडीलाई समावेश गर्नुपर्नेछ ।
डब्लुसिएलमा ललितपुर फाल्कोन्स, पोखरा पल्टन, क्यापिटल्स रोयल्स काठमाडौं, चितवन राइनोज र विराटनगर टाइन्टस गरि ५ ले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सहभागी टोली मध्ये ललितपुरको मालिकमा श्रीजना जोशी रहेकी छन् । जुन ललितपुर फाल्कोन्सको स्वामित्वमा रहनेछ ।
त्यस्तै पोखरा पल्टन प्रा. लि. को स्वामितवमा रहेको पोखराको टोलीमा विनायक पोखरेल (अध्यक्ष), काठमाडौंको दिपा अग्रावाल (प्रबन्ध निर्देशक) जेफोर स्पार्टस,चितवनमा डण्डु शेर्पा (प्रबन्ध निर्देशक) चितवन राइनोज प्रा. लि.र विराटनगरको पारस लुनिया (अध्यक्ष) रहेका छन् ।
क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना गर्ने डब्लुसिएल असोज ३ गतेदेखि ११ गते सम्म हुँदैछ ।
चितवन प्लेअफमा पुग्दा पाेखरा प्रतियाेगिताबाट बाहिर